साइड इफेक्ट नभएको दाबी गर्दै भारतको खोप मानव परीक्षणको दोस्रो चरणमा
विराटनगर, १६ भदौ । भारतको कोभिड–१९ खोप ‘कोभ्याक्सिन’को मानव परीक्षणको दोस्रो चरण सुरू हुने भएको छ ।
बीबीसीमा उल्लेख गरेअनुसार इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज (आईएमएस) र एसयूएम हस्पिटलमा ट्रायलको प्रिन्सिपल इनभेस्टिगेटर डा. ई बेंकट रावले ‘कोभ्याक्सिन’को मानव परीक्षणको दोस्रो चरण सुरू हुने जानकारी दिएका हुन् । डा. रावले ट्रायलको पहिलो चरण अहिले पनि जारी रहेको बताउँदै चाँडै नै दोस्रो चरण सुरू गर्ने योजना बनाइरहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार खोप लिने स्वंयमसेवीहरूको रगतको नमुना संकलन गरिसकेको छ र उक्त नमुनाबाट एन्टिबडीका सन्दर्भमा खोप कति प्रभावकारी छ भन्ने पत्ता लगाइने छ । डा. रावले ट्रायलको पहिलो चरणमा कोभ्याक्सिनको कुनै साइड इफेक्ट नदेखिएको पनि दाबी गरेका छन् । आईएमएस र एसयूएम अस्पताल देशका १२ वटा चिकित्सा केन्द्रहरू हुन् जसलाई आईसीएमआरले खोपको मानव परीक्षणको लागि चयन गरेको छ । यो खोप हैदराबादस्थित कम्पनी भरत बायोटेकले विकास गरेको हो ।